UÁguas Claras Bom uYesu Leisure Nature Wifi
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguArthur
Inkcazo engcono kakhulu yenziwe ziindwendwe zethu, funda uphononongo lwethu olungaphezulu kwe-100. I-Chacara Aguas Claras yindawo egqibeleleyo, ebusiswe nguThixo kwaye inhle nge-NATURE.
Imizuzu nje engama-70 ukusuka eSp Capital.
Ukongeza kwisakhiwo esipheleleyo kunye nendlu enkulu kunye nekhululekileyo, ummandla unjalo
ilungele i-ecotourism kunye nemidlalo ye-adventure. Imizuzu eli-10 kude kukho indawo enophawu lwendalo, iPedra do Coração, ikwindawo eneengxangxasi kwaye ukusuka apho kwenye i2km ukuya kwiPedra Grande entle.
Amaqela awavumelekanga ngenxa yobhubhane.
Le propati inemimandla 9000 m2, kwaye phantse yonke into ukuba ukusetyenziswa kuphela iindwendwe, entle yesikhumba kwindlu enkulu, yonke lokuphola, ingakumbi kummandla pool leyo inomnye ekhitshini alufezele kunye esitovini, isikhenkcezisi tyaba, ifriji, isitovu iinkuni, kwiindawo pfumerile , i-hammock, imithi, ujingi, ivili lomlilo, indlu yoonodoli, ibala lebhola kunye nebhola yevoli. Inechibi, kodwa ibekwe kwindawo yokuhlala ababuki zindwendwe.Amava okuloba ezemidlalo aya kuvunyelwa ngeentonga zethu ezinehuku elilungele lo mdlalo wokuziqhelanisa.
Ukuba uthanda ukuloba, ufuna ukuba sechibini ngalo lonke ixesha, khululeka, siya kwenza kakuhle.
NCEDA UQAPHELE : Sine Chalet ezimbini ngasemva kwipropathi .
4.88 · Izimvo eziyi-102
Le ndawo ikwingingqi yaseSerra Negra eBom Jesus dos Perdões. Inemarike epheleleyo yemizuzu emi-5 yokuhamba.
Intsimi yeentyantyambo ezintle ezikhulayo kwi-10-minute yokuhamba, imbono kunye nokuphakama kweemitha ze-800 kwi-15-minute yokuhamba.
Umgama oziikhilomitha ezi-2 kuphela kukho umvelisi wemifuno ephilayo ethengisa ivenkile. Iindlela ezintle zebhayisekile kunye neendlela ezibalekayo ezimangalisayo, iimbaleki zifikelela kwidama laseNazare elimangalisayo kwiikhilomitha ezili-10 zendlela ethe tyaba!
Uya kumangaliswa ngulo mzi. Lo masipala wayeyinxalenye yeRota dos Bandeirantes eyayikhenketha isiya kumbindi weBrazil ikhangela ubutyebi. Wazalwa ekwakhiweni kwendlu yecawa, okwangoku ngo-1705.
ISanctuary yeyona nto inomtsalane ePerdões ngolwakhiwo oluhle lwesitayile saseBaroque saseMinas Gerais, kodwa iBom Jesus ayiphelelanga nje kukhenketho lwenkolo. Esi sixeko sithandwa kakhulu ngabathandi bezokhenketho. Ezi ziindawo ezigciniweyo zeHlathi leAtlantiki, ezityebileyo ngeentaba namanzi. Abakhenkethi bangonwabela iingxangxasi, iintaba kunye neendlela ezihamba ehlathini, kugxininiswa kwiPedra do Coração, engaphezulu kwe-1,000 yeemitha ukuphakama kwaye ijonge ingxangxasi entle yaseCachoeira do Barrocão.
Nelson E Carla Cris
Siyakuthanda ukusebenzisana, kodwa kuphela xa uceliwe, ukukhangela kwenziwa kunye nomgcini wethu uRoberto kwaye ukhangele kunye nesicakakazi sethu, uya kuba nemfihlo oyifaneleyo, kodwa ukuba ufuna ukunyanzeliswa, ukuba ufuna nantoni na, unayo. kwindawo elungileyo, Nelsão kunye linguCarla uthando ukusebenzisana kunye nokhathalelo. bona ukupheka kunye nokulungiselela ukutya zonke iintlanga, bahlangana imenyu elula kwaye ngexabiso yayiyinzwakazi encamisileyo, akukho namnye wakha basixhathise pizza ... linguCarla lihombise imibhiyozo kunye ilungiselela ephatha amnandi a lot of bobuchule kunye whimsy, inika kuzingelwa scavenger kunye nemisebenzi yabantwana, bonke ubhalo, ukuba intsebenziswano uvumelekile.
Siyakuthanda ukusebenzisana, kodwa kuphela xa uceliwe, ukukhangela kwenziwa kunye nomgcini wethu uRoberto kwaye ukhangele kunye nesicakakazi sethu, uya kuba nemfihlo oyifaneleyo, k…